Igbo, John: Lesson 055 - Jizọs bu ìhè nke uwa (Jọn 8:12-29) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 055 (Jesus the light of the world)
d) Jizọs bu ìhè nke uwa (Jọn 8:12-29)
12 Ya mere, Jizọs gwara ha okwu ọzọ, sị, "Abụ m ìhè nke ụwa. Onye na-eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ."
Jizọs bụ ìhè Chineke. Onye ọ bụla nke na-abịaru ya nso na-ekpughere ya, kpee ya ikpe, kọwaa ya ma gwọọ ya, ka ọ ghọọ ìhè n'ime Kraịst. odighi ìhè ozonwere ike imeghe anyi ma mee ka obi anyi di ike, maob ghi Jizos. Ihe omumu na okpukperechi nile ma oburu na acho ha agagh adi ike n'ihi na ha kwere nkwa ngbaputa n'echiche na ihe ndi ozo. N'ezie, ha na-eduga ndị ọjọọ n'ime ọhụụ miri emi karị ma kee ha n'ebe ahụ. Ìhè ya bụ anyanwụ na-egbuke egbuke nke na-eme ka ndụ dị ọhụrụ. Ngwọta nke mkpụrụ obi a nwere ọnọdụ, nke ahụ bụ ịbịakwute Jizọs site n'okwukwe ma soro ya site n'ịjụ onwe onye. Site na nke a na-esochi Jizọs mgbe niile, a na-agbanwe anyị n'ọchịchịrị gaa n'ìhè. Anyị na-ahụ ụzọ na ìhè ya iji ruo ebe, nke ahụ bụ otuto nke Nna na Ọkpara na-egbuke egbuke nke ndụ.
13 Ya mere ndi-Farisi siri Ya, Gi onwe-gi nāb͕ara Onwe-gi àmà. Àmà-gi abughi ihe kwesiri ntukwasi-obi. 14 Jisus zara ha, si, Ọ buru na Mu onwem ab͕ara Onwem àmà, àmàm bu ezie: n'ihi na Mu onwem mara ebe M'siri bia, na ebe Mu onwem nāla; ma ị maghị ebe m si bịa, ma ọ bụ ebe m na-aga. 15 Unu onwe-unu nēkpe dika anu-aru si di. Anaghị m ekpe onye ọ bụla ikpe. 16 Ọ buru kwa na Mu onwem ekpe ikpe, ikpém bu ezie: n'ihi na ọ bughi nání Mu nọ, kama Mu onwem nọyere Nnam Onye ziterem.
Okwu Jisos kwuru okwu banyere ndi Ju, "Mu onwem bu," ha chere na obu onye nya isi na idi elu, neme ka onwe ya buru ìhè nke uwa. Ha na-akọwa àmà ya dị ka njehie na ụgha, na-ekwubiga okwu ókè na-aghọgbu mkpụrụ obi.
Jizos zara, si, Onye-àmà nkem bu onye ezi-okwu: n'ihi na Mu onwem adighi-ewere onwem wezuga onwe-ya, kama ọ bu site n'ezi-okwu Chineke ka M'nēme ka m'di n'otu mb͕e nile: unu amataghi na Mu onwem siri n'ebe Nnam nọ puta; ekwu okwu banyere onwe m, ma okwu m kwekọrọ n'eziokwu Chineke, okwu m bụ eziokwu, jupụtara n'ike na ngọzi."
"Okwu nke aka gị dị elu, n'ihi na ọ bụ naanị mmadụ na-ahụ ihe ndị ahụ, ị na - ele onwe gị anya dịka ndị ikpe ma kwenye na ikike gị ịme ihe ziri ezi ma ihiere, ị maghị isi iyi nke ihe, ma ọ bụ mmegharị ma ọ bụ nsonaazụ ha. egosi na nke a bụ na ị maghị m. Ị na-ekpe m ikpe naanị site n'aka mmadụ, ma m na-anọ na Chineke mgbe niile.
Kraist bu onye ikpe nke uwa, eziokwu nke madu n'otu oge. Ọ harughị ka ikpe ma ọ bụ ibibi anyị, ma zọpụta anyị. Ọ jụghị onye ọjọọ ọ bụla, onye omempụ ma ọ bụ onye a na-asọ oyi, mana ọ chọrọ ịzọpụta mmadụ nile ma dọba ha n'ịhụnanya ya. Eleda onye obula anya, ma choputara ya ihe oyiyi ahu nke Jisos choro imeghari ma o bu meputa.
17 Edekwara ya n'iwu gị na àmà nke mmadụ abụọ dị irè. 18 Mu onwem bu Onye nāb͕ara Onwem àmà, Nna Nke ziterem nāb͕a kwa àmà bayerem.
N'ihi adịghị ike anyị, Jizọs rutere n'ụkpụrụ. Ma ọ kọwara nke a dị ka iwu gị, nke ahụ bụ usoro ị chọrọ dị ka ndị mmehie. N'ikwekọ n'iwu a, onye chọrọ ịkwado eziokwu ahụ aghaghị ịmepụta ndị akaebe abụọ iji kwado nkwupụta ya na nkọwa niile. Mgbe ahụ, a ga-ekpe ikpe ikpe na ntọala ahụ (Deuterọnọmi 17: 6; 19:15). Jizọs ekwughị na ihe a chọrọ. O mesoro nkwupụta ya dịka onye àmà mbụ, Nna ya bụkwa onye akaebe na-agba akaebe, onye na-akwado nkwekọrịta zuru oke n'etiti ha. Enweghi nkwekọ, Ọkpara ahụ apụghị ime ihe ọbụla. Nke a bụ ihe omimi dị n'atọ n'Ime otu. Chineke na-agba akaebe na Jizọs, dị ka Jizọs na-agba akaebe na Chineke.
19 Ya mere ha siri Ya, Òle ebe Nna-Gi di? Jizos zara, si, Unu amataghim, ọ bughi kwa Nnam. Ọ bụrụ na ị maara m, ị ga-amakwa Nna m. "20 Jizos kwuru okwu ndị a n'ụlọ akụ ahụ, ka ọ na-ezi ihe n'ụlọ nsọ. Ma ọ dighi onye ọ bula jidere Ya, n'ihi na oge hour Ya akābiaghi.
Ndị Juu ghọtahiere Jisos, ma ha achọghị ịghọta, kama ha chọrọ ịra ya n'ụzọ doro anya, ha jụrụ, "Ònye ka ị na-akpọ Nna?" Joseph ama akpa, ndien mmọ ama ọfiọk se Jesus ekenịmde ke "Ete mi." Ma ha choro okwu doro anya na Chineke bu Nna ya.
Jisos azaghi ha, n'ihi na ihe omuma Chineke abughi n'amaghi Jisos. Ọkpara ahu nọ nime Nna ahu na Nna nime ya. Onye na-agọnahụ Ọkpara ahụ, olee otú onye ahụ ga-esi mara Chineke n'ezie? Ma onye ọ bula nke kwere na Ọkpara ahu ma hu ya n'anya, ya onwe ya ka Chineke kpughere Onwe ya; n'ihi na onye ọ bula nke nāhu Ọkpara ahu nāhu Nnam.
A na-ekwu okwu ndị a n'otu akụkụ nke ụlọ nsọ ebe a na-enweta onyinye. O doro anya na e nwere ndị nche gburugburu ụlọ nsọ ahụ. N'agbanyeghị ndị agha a, ọ dịghị onye ọ bụla nwere ike ijide Jizọs. Ogwe aka Chineke bụ nchekwa ya. Oge awa nke nraranya ya nke Chineke nyere n'iwu abughi otua. Naanị Nna gị nke eluigwe nwere ike ikpebi ọdịnihu gị.
EKPERE: O Christ, anyị na-eto ma hụ gị n'anya. Ị naghị ekpe anyị ikpe dị ka anyị kwesiri, ma ị na-azọpụta anyị. Ị bụ ìhè nke ụwa, na-egbu ndị na-abịakwute gị. Gbanwee anyị site na ụzarị nke ịhụnanya gị ma mee ka ike anyị sie ike ka anyị wee mara gị.
Olee otú àmà nke Jizọs n'onwe ya dị ka ìhè nke ụwa si metụta ihe ọmụma anyị banyere Nna nke eluigwe?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:12 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)